Isitolo esidayisa yonke impahla esikhwameni china JAHOO
Ukucaciswa komkhiqizo Into eshibhile esetshenzisiwe kabusha eyenziwe ngokwezifiso Ilogo Okuphrintiwe Kwegrocery Shopping Packaging Craft Brown Kraft Paper Bag Ephethe isikhwama sephepha lokudla Usayizi 5.25x3x8.5 amayintshi, 8 × 4.75 × 10 inches, 10x5x13 inches, 16x6x12 inches, or Customized. isikhwama sephepha lokudla Ubukhulu 80gsm, 90gsm, 100gsm ...
Into Ishibhile esetshenzisiwe esenziwe kabusha esenziwe ngokwezifiso Ilogo Okuphrintiwe Kokudla Okuthengiswayo Okuphakelayo Ubuciko Bokukhishwa Kwephepha Lesikhwama Esiphethe izikhwama zephepha lokudla
Usayizi 5.25x3x8.5 amayintshi, 8 × 4.75 × 10 amayintshi, 10x5x13 amayintshi, 16x6x12 amayintshi, noma ngezifiso. isikhwama sephepha lokudla
Ubukhulu 80gsm, 90gsm, 100gsm, 110gsm, 120gsm noma ngokwezifiso isikhwama sephepha lokudla
Uhlobo lweyinki Isikhwama sephepha sokudla esenziwe ngamanzi se-Eco-friendly
Izinto Iphepha le-Brown Craft / Kraft, i-White Craft / i-Kraft Paper, noma i-Custom Paper
Isici I-FSC eqinisekisiwe engu-100% evuselelekayo, Ukwenza Umshini Okuzenzakalelayo, Ukuphrinta kwe-Eco-friendly, Okuqinile, futhi Okunembile.
Uhlobo Lokubamba Izibambo ezisontekile, Izibambo ezi-Flat, iRibhoni, intambo ye-PP, ukotini, inayiloni, ukusika okwehlisiwe noma isibambo esenziwe ngokwezifiso
I-Surface Qeda Varnishing, isicwebezelisi / Math yokuvikela ngocwazi, Gold / Isiliva Zezıhlabane Wokushaya, Embossing, UV esinemthombo, Ucwecwe Wokushaya, Hologram Effect, njll
Isicelo Ukuthenga, Isipho, Umshado, Ukudla, Ukuthengisa Okuthengiswayo, Iphathi, Izingubo, Ukuphromotha, Indawo Yokudlela, njll.
Ikhwalithi yokulawula Izinsizakusebenza Ezithuthukile Nethimba Le-QC Elinolwazi lizohlola izinto ezibonakalayo, imikhiqizo eqediwe futhi eseqediwe kuzo zonke izinyathelo ngaphambi kokuthumela
Izitifiketi FSC, SGS, BSCI, ISO9001: 2008, njll
Ishibhile esetshenzisiwe esenziwe kabusha esenziwe ngokwezifiso Ilogo Okuphrintiwe Kokudla Okuthengiswayo Okuphakelayo Ubuciko Bokukhishwa Kwephepha Lesikhwama Esinezibambo
Q: Ngingakuthemba kanjani?
A: Singabantu ifektri zokunyathelisa elise Wenzhou, Isifundazwe Zhejiang. Sinemishini eminingi esezingeni eliphakeme yokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo wethu kuwo wonke amaklayenti ethu. Sicela uzizwe ukhululekile ukusivakashela!
A: Sicela usithumelele uphenyo ngezinto, ubukhulu, ubuciko nobungako. Ngaphandle kwalokho, ungasithumela izithombe nemibono, sizokunikeza iziphakamiso zethu zobuchwepheshe besicelo sakho.
Q: Izothunyelwa nini i-oda lami?
A: Ngokuvamile isikhathi sokukhiqiza siyizinsuku eziyi-15-20 zekhalenda. Uma i-oda lakho liphuthuma, singalihlela njengokubekwa phambili. Sicela uxhumane nokuthengiswa kwethu ukuthola umugqa wesikhathi ngqo.
Q: Ngingathola isampula ngaphambi kokufaka i-oda?
IMP: Singahlinzeka ngemikhiqizo efanayo yamahhala esiyikhiqizele ukuhlolwa kwekhwalithi, kanti wena ukhokha izindleko zokuthumela kuphela. Uma ufuna ukwenza ngezifiso isampula ngokomzimba njengezidingo zakho kuzoba nezindleko ezithintekayo. Kodwa-ke, lokhu kungabuyiselwa emuva ekukhiqizweni ngobuningi.
Q: Ngingakhokha kanjani?
A: Samukela izindlela ezahlukahlukene zokukhokha, njenge-T / T, isiqinisekiso sokuhweba, i-paypal…
Indlela enhle ukuqinisekiswa kokuhweba, ukuthengisa kwethu kuzokuthumela isixhumanisi sokukhokha, futhi ungakhokha online.
Langaphambilini ibhokisi le-noodle
Olandelayo: ibhakede lephepha